Vao haingana no nivoaka ny fonja… : mpanao fanafihana mitam-piadiana 14 lahy voasambotry ny zandary | NewsMada
Vao haingana no nivoaka ny fonja… : mpanao fanafihana mitam-piadiana 14 lahy voasambotry ny zandary
Par Taratra sur 18/03/2016
Olona marobe indray voasambotry ny zandary, voalaza fa jiolahy raindahiny eto an-drenivohitra sy ny manodidina. Olona efa nigadra avokoa ireo, ary vao haingana no nivoaka ny fonja.
Voasambotry ny zandary avy eny Ambohimangakely ny jiolahy raindahiny mpanao fanafihana mitam-piadiana amin’ny faritra maro eto an-dRenivohitra sy ny manodidina. Ny 12 marsa lasa teo, nahazo vaovao tamin’olona tsara sitrapo ny zandary fa misy lehibena andian-jiolahy raindahiny efa nokarohina hatry ny ela antsoina amin’ny anaram-bositra hoe Bota, misotro toaka ary miaraka amin’ny volabe ao amin’ny “bar” iray eny Ambohimahitsy.
Nidina teny an-toerana avy hatrany ny zandary ary nanao ny fisamborana. Niaiky izy ireo, nandritra ny famotorana ary nanoro ireo namany, fa izy ireo no nanao ireo fanafihana mitam-piadiana teny amin’ny faritra Ambohimangakely sy ny manodidina. Nanafika tany Tsarahonenana, Ampasampito, Ambohimirary, Ampanotokana, Ankadindramamy, Soamanandrariny hatrany Ambohipo nanomboka ny volana novambra 2015.
Valo lahy ny isan’ireo jiolahy voasambotry ny zandary teny Ambohimahitsy ary voalaza fa vao avy nivoaka ny fonja ny ankamaroan’izy ireo. Ankoatra ireo fanafihana tranon’olona sy toeram-pivarotana, manendaka izay olona tratra alina ihany koa ireto olon-dratsy ireto. Nahatrarana basy poleta iray vita avy any Italia miaraka amin’ny bala telo tany amin’izy ireo, ary mbola misy koa ireo namany hafa mbola karohina.
Tsy nijanona teo fa nosamborina ihany koa ireo mpandray entana halatra miisa enina izay vehivavy ny iray. Tratra tany amin’ireo ny entana toy ny baffles, vilany, subwoofer, tv ecran plat, lecteur, amplificateur, sns… Naseho ny mpanao gazety, omaly, ireo ary natolotra ny fampanoavana omaly ihany. Mety hihena indray ny asan-jiolahy amin’ireo faritra voatanisa etsy ambony. Ny tena raindahiny mihitsy ireto tratra. Matetika anefa, ny eo tratra; ny hafa mipongatra indray.